Umhla My Pet » Indlela Yokusondela Women Ukuba uneentloni?
Wena guy uneentloni olu drawback sakho siye kwanyanzeleka ukuba ahlale enye yonke le minyaka.
Ngaba le ngxelo ingentla uchaze imeko yakho? Ngaba ufuna lula-ukuya-ukuphumeza, kodwa iindlela ezisebenzayo lokuyigxotha le ngxaki? ukuba ewe, ngxoxo ingezantsi kufuneka akuncede.
Woyisa ukuba neentloni, kuya kufuneka ukuba ube nokholo wena yincopho izinto ezininzi kunokukunceda ukuphumeza ukuba ukholo. Funda ukwazi ukuba yintoni kanye ekufuneka uyenze.
Yinyaniso ukuba umntu akakwazi ukutshintsha inkangeleko yakhe. Nje ngeziphumo, umntu akanako ukwenza nantoni ngendlela enomtsalane ejonga, kodwa ngokuqinisekileyo ukwenza izinto ezithile ukuze khangela nentembelo ngakumbi.
Yinto Iyaqondakala ukuba abanaxesha kuye nawuphi na umfazi ngenxa kalusizi yakho, kodwa inye into kufuneka uqonde ukuba akukho mntu wumbi, ngaphandle kokuba (kunye nabantu mhlawumbi abambalwa kufutshane kakhulu kuwe) uyazi ukuba uneentloni.
Ngoko ke, ingakhuphela ngokulula zama babe nabantu bengayazi aqonde ukuba omnye kwabo bucala (funda uneentloni) amadoda sasihlala kude amantombazana. Oku kuya kwenza kube lula kuwe ukuba ukufihla bashfulness yakho; xa uyilawula ukwenza le inshorensi-up ngempumelelo, uya ngokuzenzekelayo siqalise nentembelo ngakumbi.
Ukuze khangela siqinisekile umele kugxininisa isuntswana endleleni onxiba. Kuphephe enxibe iimpahla ukuba akayi kuvumela ukuba ume ngaphandle esihlweleni. Hayi, akuyi kufuneka ukuba ngokunxiba loo bhulukhwe jiko kunye shirt eliqaqambileyo ezinemibala okubonwa isihlwele. khetha nje iimpahla zakho kancinane sandule; ukuba banxibe iimpahla khangela entle kuwe, uya kuvunywa ngokuzenzekelayo imfutshane abafazi eziningqongileyo.
Ngaba uceba woo intombazana uthandwayo kwaye uninzi nomtsalane macala? Njengoko umntu oneentloni, umele akuphephe uzama ukuba.
Iyinyaniso ukuba neentloni wakho ziyakwehlisa ngokubonakalayo xa uqala ukuba khangela nentembelo ngakumbi, kodwa loo nto ayithethi ukuba sele smart ngokwaneleyo ukurhwebesha intombazana ishushu ngeenxa.
Nayiphi na intombazana osele ithandwa kwaye yaziwa ngokuba lowo yeyona nomtsalane kwiqela lakhe ngokuqhelekileyo siqinisekile kunene. Nkoloseko nahlanganisa kutshanje kakhulu akayi kuba ngokwaneleyo ukuya intombazana enjalo; ukuzithemba uya kuyaphula yeyakho mzuzu uya sisondela.
Ngoko ke, Injongo yakho kufuneka ukufumana intombazana leyo ifanele inqanaba yakho; kusoloko ukuphepha besondela abafazi bakoyikise.
Musa abasafuni ukumjonga ngamehlo
Xa ekugqibeleni ukuthetha nomntu, musa abasafuni ukumjonga ngamehlo. Namabhinqa afumana wooed lula xa umntu ukhangela emehlweni abo ngaphandle kwesiphazamiso.
Yi le, nokuba, mhlawumbi umsebenzi zinzima umntu oneentloni inokuze kucelwa ukuba benze; kodwa, xa i.e ingumqobo kuqala. Ekusondeleni umfazi wawela kuya kufuneka ukuba ubeke iinzame kangangoko unako ukuwela elilandelayo.
Ukwenza zoqhagamshelwano iliso kulula kakhulu ngoko okunene abazidlayo. Emva ukumjonga ngamehlo, zama ukugcina ibe imizuzu embalwa; ngovalo onalo yokuqala uya kutshatyalaliswa.
Ezi ngcebiso zingentla kufuneka akuncede ukuba uphume iqokobhe beneentloni. Ngaphandle zilandelayo ezi ngcebiso, kwakhona ukusebenza ekuphuculeni izakhono zakho ncokole yaye ihlamba uchwayitile.